Zeevou | Mubayiro-Kukunda PMS, Channel Manager & Yekutsvakira Injini
Mubayiro-kuhwina PMS & Channel Manager
Zeevou iProperty Management System uye Chaneja maneja iyo inogadzira ingangoita nzvimbo dzese dzebhizimusi rako rekuhota kwenguva pfupi, inogadzirisa maitiro, uye inoderedza kukanganisa kwevanhu.
Zvimiro Zvinoshandura Rako Bhizinesi Kamwe Uye Zvese Zvese
Zeevou's yakawanda-nzvimbo PMS inokutendera iwe kubata ako ese zvivakwa kubva kune imwe yepakati login.
Iva nechokwadi chega chega chekubika zvikwekwe mumabhokisi ese, zvisinei kuti anobva kupi.
Simbisa mabhaisikopo ako akananga needu SEO-inoshamwaridzika webhusaiti inosanganiswa neepamusoro ekuongorora maturusi
Pusha mitengo yako & kuwanikwa munguva chaiyo kune anopfuura mazana maviri ematanho needu ane simba maviri-nzira API kubatana.
Maitiro ekubhadhara aZeevou anotendera iwe kuve mukutonga kwekubhadhara kwako, nekudaro uchivandudza yako yemari-kuyerera.
Rega vachengeti vako vemba vawane ruzivo zvirinyore pavanenge vachienda uye vabatsire kugadzirisa kwako kubhadharisa.
Iva nekutarisisa kwakanaka kwekuita kwebhizinesi rako chero nguva - ingave mari, kugara kana mashandiro.
Chengetedza zvese zvekutaurirana (maemail nemaSMS) evashanyi nevashandi kubva kune imwe nzvimbo yepakati uye chengetedza zvese.
Famba yakachinjika-yakavakirwa-mukati muenzi CRM iyo inogadzira email kero kuunganidzwa uye kuvaka GDPR-inoenderana dhatabhesi pasina kusimudza munwe.
Shingairira yako yekuchenesa manejimendi - ingave nevari-mumba vashandi kana nekuitenga kontrakiti kune yekunze yekuchenesa kambani.
Zeevou inobvumira varidzi uye varidzi vemba vanoshanda nemakambani ekuhaya maneja manejimendi kuti vaone muhoro wavo munguva chaiyo.
Zeevou inokutendera kuti urambe uri pamusoro pezvinhu zvese zvekuchengetedza uye tarisa kufambira mberi kwavo kubva paA kusvika paZ.
Isu tinokupa iwe Premium Rutsigiro nekuti isu tinoziva zvizere kuti kubudirira kwedu kunoenderana neyako.
Zeevou inoita kuti iwe uverenge purofiti kuverenga iwe uye varidzi vaunotarisira kwairi.
Nunura yakanakisa yevaenzi chiitiko naZeevou uye tarisa rako bhizinesi kukura kubva pasimba kusimba!
Chengetedza mashandiro ako ese epakati, uye gadzirisa chikamu chakakura cheako ezuva nezuva mabasa ekutungamira.
Zeevou inokutendera kuti umise nyore nyore mitengo muzvizhinji zvezvinhu zvakawanda kana kusundira mitengo uchishandisa maturusi emitengo ine simba.
Shandisa ichi chakasarudzika ficha kubata ako husiku, vhiki nevhiki, uye pamwedzi rentals zvese kubva kune imwe yepakati login.
Zvitsva zvitsva zvinoburitswa mwedzi wega wega, sezvo isu tichivavarira kuve kumberi pakuumba iyo indasitiri.
Shandura Maitiro Ako
uye Gara kumashure
Zeevou inosangana neakasiyana siyana evanobatirana kuti vakwanise iwe kugadzirisa zvese zvebhizimusi rako rekugamuchira vaenzi kubva pamitengo, kuvhota kwevaenzi, kune kutaurirana uye accounting.
Chii Chinoita Kuti Tive Vakasiyana?
Chikwata chedu kuZeevou chakagadzira zvinoverengeka zvakasarudzika maficha, zvichibva pamhinduro kubva kuvashandisi vedu izvo zvinoita kuti chigadzirwa chisangane neicho chaicho hupenyu zvinodiwa. Isu tinotenda mukuvandudza, kugona, uye kukura. Isu tinosimudzira, tinoshanduka uye tinoita zvinhu nenzira yakasarudzika. Kuti uone izvo zvinotisiyanisa isu kubva kumakwikwi, tinya bhatani pazasi.
Wedzera Kusvika Kwako
nekubatanidza ku200+ Channel
Zadza husiku hwako husina chinhu nekunyora yako yekurenda pane dzakawanda chiteshi sezvinobvira uchidzivirira kuwandisa kwemabhuku. Govera mitengo yako uye kuwanikwa uine mashoma mashoma kune edu anopfuura mazana maviri ematanho emukomana kuburikidza neZeevou ine simba, chaiyo-nguva, 200-nzira API yekubatanidza kugona.
Zvekushandisa ndizvo zvatinoita kupfuura! Kutanga nekukodha zvivakwa zvako paZeevou, seta mitengo yako, kuwanikwa, uye kubatanidza chiteshi. Sevha nguva ye admin uye isa mari mukukura. Wobva wagara pasi, zorora, uye unakirwe!
Wakagadzirira kukura uye kuyera bhizinesi rako? Rega Zeevou ishandise ako epasire mabasa uye maitiro. Iwe unongotarisa mukuwedzera purofiti yako. Ngatikuitirei zvinorema kusimudzira iwe. Kureruka kwakadaro!
Zeevou haisi chete PMS uye maneja maneja. Isu tave kuda kudzikisira kutsamira kwako kumaOTA. Ngatibatanidzei mauto, tivhiringidze iyo indasitiri uye tione Iyo Yakanangana Booking Revolution! Mukana wakadai!
Joinha Yedu Yakazara Yemahara Yakananga Kuverengera Platform
Nyora zvako zvivakwa paZeevou Direct uye tarisa mari inokodzera-zvakanaka kubva kunyoreswa kwakananga kuyerera ichipinda muhomwe dzako. Wanga uchiziva here kuti mazhinji ekubhuka mapuratifomu anobhadharisa 15-25% mubhadharo? NaZeevou Direct, vese varidzi uye vashanyi vanowana zvirinani zvibvumirano sezvo pasina wechitatu bato achicheka akachekwa. Uyezve, hapana inomiririra uye info yekushanya yevaenzi haina kubvumidzwa, saka unobva wakurumidza kutaurirana. Saina mahara izvozvi uye tibatsire kuona Iyo Inotungamira Kuverenga Shanduko! Hapana tambo dzakabatanidzwa!
Value-for-money Mitengo Mapakeji eZvese Zvinodiwa
Hapana makomisheni, hapana vepakati, hapana mari yakavanzwa!
Mikana yeVatendi haigumi. Unleash Zeevou simba rizere nekunyorera kune edu emwedzi kana epagore zvirongwa uye siya zvimwe zvacho kwatiri. Fambisa zvese izvo Zeevou's PMS, maneja maneja, uye injini yekubhuka inofanirwa kupa. Nakidzwa nerunyararo runyararo uye zorora.
Tora SEO-inoshamwaridzika, yakanangana yekubhuka webhusaiti uye nyora yako ekurenda pane yedu isina-komisheni yekubhuka chikuva, Zeevou Direct. Shandura kugadziriswa kwekubhuka kwako kwakananga. Joinha mauto nhasi uye tibatsire network yedu yeVabatsiri Mauto kuwedzera kwedu kusvika!
Izwi kune Vatendi veGore
Izvo zvikamu zvakawanda zvaunazvo, zvishoma zvaunofanirwa kubhadhara kune yega yega unit.
Muvhangeri kana Patron?
Zvinotaurwa neVatinoshamwaridzana Navo Nezvedu
Kutanga, ini ndinofunga masevhisi uye nekubatsira iwe kwaunogamuchira kubva kuZeevou kwakangonaka. Zvirongwa zveku- boarding, kunanga WhatsApp kuonana nemudzidzisi wako, Facebook messenger pamwe nekutaurirana kwepamhepo paZeevou saiti. Iwe haugone kukumbira zvimwe zvakawanda. Kungofanana nechinhu chero chipi zvacho, zvinotora kashoma kuti uite chimwe chinhu kusvikira wajaira uye ndiri kuwana izvozvi kuti ndinogona kufamba nenzira yeZeevou ndisingade zvinyorwa zvekubatsira uye maFAQ ayo zvakare ari maturusi anoshamisa ekushandisa kana iwe uchida kuyedza zvinhu pane yako ive yako uye uzvidzidzise. Iine zvese zvaunoda kubva kukiyi kodhi, yekuchenesa mashedhi, otomatiki maemail uye nezvimwe zvakawanda uye ndinofara kuti ndawana Zeevou uye ndakaita ongororo yangu ndisati ndaenda nemumwe munhu.
Ngano Inoshandirwa Yekugara LTD
Takashandisa Zeevou kwemavhiki akati wandei uye bhenefiti yekumira kwandiri inofanirwa kunge iri sevhisi. Kugona kubhuka izere awa ratidziro kwaive kutanga kukuru kune yangu Zeevou rwendo rwakateverwa kumusoro nehafu-awa-yekukwira chikamu uye ini ndinokwanisa kutumira meseji yangu kuZeevou pese pandinoda. Kuve mutsva kumabhizimusi ekugara anoshandirwa kwaityisa uye Zeevou haisi chikuva chakareruka chekuziva, asi chiratidzo chakareba chekambani chakabatana nebasa revatengi zvinoreva kuti ndinoziva kuti ndiri kuwana mari yangu!
Green Wall Zvivakwa Solutions
Ndinogona kutaura nekutendeseka kwese Zeevou akachinja hupenyu hwangu! Sezvo ndanga ndapfuura nemashanu mamaneja mamaneja mubhizinesi rangu reServiced pekugara kusvika parizvino, ini pakupedzisira ndazowana rakaringana bhizinesi redu. Zviri nyore, Zeevou inogadzira zvinhu zvakapusa! Inokurumidza, zviri nyoreoo kushandisa. Kubva zvandakapinda Zeevou ndakave neimwe nzira nguva yekutarisisa pane bhizinesi rangu pane kuvemo! Sebasa reSA tinonyatso dzorera bhuku rakananga mushandirapamwe. Zeevou inobatsira iwe kuita izvi. Rutsigiro rwuripo runoshamisa, kana ndikabvunza mubvunzo muboka revashandisi veFacebook ndine mhinduro mumaminetsi. Zeevou zvirokwazvo chipo chemubatiri Anoshandirwa Anopa pekugara mupi. Ndatenda!
Ndakatanga neyuniti mayunitsi asi ndaida kuenda nezvezvinhu sekunge ndine zana kuona kuti ndinogona kukwira nekukurumidza uye zvinobudirira. Zeevou haasati arovha zvine mutsindo pamusoro pechannel maneja uye inoita kuti kutendeuka kwakananga kuve kwakatwasuka, nekuda kwavo isu takachengetedza £ 100K kubhuka kubva kuhusiku-husiku hutatu kuburikidza neAirbnb. Kufambira mberi uye kugadzirisa zviri kugara zviripo uye vanotora mhinduro zvakanaka uye vanoshandisa shanduko dzandataura idzo dzakanaka kuona. Kunyangwe shefu murume iye haana kana hanya nekutarisa kana ndasungwa. Icho chidimbu chakakura che kit uye chichava chinoshamisa mukati megore kana maviri. Joinha chimurenga…
Zeevou akabatsira Cliftonvalley Apartments kuyera kubva pamatanho matatu kusvika gumi nemashanu. Zeevou chishandiso chakakura chinotibvumidza isu kunyatsogadzirisa mabhuku edu, vashanyi, vatengesi uye mari. Kubatanidzwa neChiratidzo, Xero uye Stripe kwave kwakabatsira zvikuru uye kwakaderedza basa redu, zvichitibvumidza kutarisa kune dzimwe nzvimbo dzebhizinesi. Zeevou inoenderera mberi ichivandudza nekufamba kwenguva uye iri kukurumidza kuve yakazara-yekumira-shopu kune ese mativi ebasa redu reSevhisedzi Yekugara. Zeevou ane shungu yekuteerera uye kugadzirisa icho chigadzirwa kuti zvikwanise zvirinani zvido zvevashandisi vayo. Tinotarisira kuyedza izvo zvitsva zvinhu parizvino pane yakazara nzira.
"Hazvisi zvekuzvikudza iye anoda nyika yake, asi kune uyo anoda nyika yese. Nyika inyika imwe chete, uye vanhu vagari vayo." Baháʼu'lláh
Zeevou Anokunda VRMB's Keystone Mubairo 2021